Anyanwụ anyanwụ nke anyanwụ anyanwụ, ìhè anyanwụ, anyanwụ na-ekpuchi ọkụ
Nkọwa:Ìhè anyanwụ,Mbara Igwe,Mbara Igwe Mmiri,Obere Ogige Uhie,,
Ìhè anyanwụ,Mbara Igwe,Mbara Igwe Mmiri,Obere Ogige Uhie,,
Home > Ngwaahịa > Ìhè anyanwụ
Ngwaahịa nke Ìhè anyanwụ , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ìhè anyanwụ , Mbara Igwe suppliers / factory, wholesale high-quality products of Mbara Igwe Mmiri R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Igwe ọkụ na-acha anyanwụỌzọ
Mgbidi Mmiri nke MmiriỌzọ
Okirikiri okporo igweỌzọ
Mbara Igwe OchieỌzọ
China Ìhè anyanwụ Ngwa
Solar Light eji ìhè anyanwụ dị ka ume, na anyanwụ ogwe-ana batrị n'oge ụbọchị, na batrị-enye ike n'abalị. Ọ dịghị mkpa mgbagwoju anya dị mgbagwoju anya ma dị oke ọnụ. Ọ nwere ike ịhazigharị oriọna na lantern n'enweghị ihe ọ bụla. Ọ dị mma, ịchekwa ume na enweghị mmetọ, na-enwe ike ma bụrụ onye a pụrụ ịdabere na ya n'enweghị ọrụ ntuziaka, ma na-azọpụta ọkụ eletrik na mmezi.
Ike nchekwa: inye oku site na ntughari nke fotovoltaic, nke na-adịghị agwụ agwụ ma na-adịghị agwụ agwụ. Nchedo gburugburu ebe obibi: enweghị mmetọ, enweghị mkpọtụ, ọ dịghị nkuzi.
Nchedo: ọ dịghị ihe ọghọm dị ka ọkụ eletrik ma ọ bụ ọkụ. Nchekwa: Ntinye dị mfe, ọ dịghị mkpa ịwunye wires ma ọ bụ "mepee afọ" na-egwu ala, ọ dịghị nchegbu gbasara njedebe ike ike.
Ogologo oge: Ngwaahịa dị elu na nkà na ụzụ, usoro nchịkwa, ngwa bụ ụdị mba ụwa, atụmatụ ọgụgụ isi, àgwà a pụrụ ịdabere na ya.
Klas ukwu: ngwaahịa sayensi na nkà na ụzụ, ume ọkụ, iji nkeji dị mkpa maka sayensị na teknụzụ, onyinyo acha akwụkwọ ndụ, ọkwa nwelite.
Enweghi ego: oge ​​ugbo na uzo ozo (ugwo ugbua nke ugbua site na ngbanwe ike, ike, igbe nchikota, USB, injinia, wdg), otu ulo oru ego, uru ugbua.
Fi zz Global akpan ewebata usoro oriọna na lanterns dị ka obodo ọnọdụ: anyanwụ n'okporo ámá ìhè s, anyanwụ na-agụ ìhè s, okporo ụzọ ọkụ, na-ama ụlọikwuu ọkụ, wdg, na yi imewe, na longlife ojiji, agba ndụ gị.
Mbara Igwe Mmiri